Muranka Lixda Goobood ee Xeebta iyo Shirarkii Laga yeeshay. | Somaliland Today
← DAAWO: Wasiirka Waxbarashada Somaliland Oo Ka Hadlay Diwaangalinta Lixda Goobood Ee Xeebta.
Dawladda Hoose Ee Hargaysa Oo Dhamaystirtay Qalabkii Wadooyinka Lagu Samaynaayay, Wershadii Jaygna Istaadhay.+SAWIRRO →
Muranka Lixda Goobood ee Xeebta iyo Shirarkii Laga yeeshay.
Horaantii Bishii Feb. ee Sanadkan 2016, ayay ku beegnayd waqtigii la bilaabay Diiwaangalinta Codbixiyayaasha Gobolka Awdal, maalmo ka hor Qasriga Madaxtooyada JSL waxa ka qabsoomay Shir ay isugu yimaadeen Madaxda Saddexda Xisbi Qaran, Komishanka Doorashooyinka iyo Wasiiro Xukuumada ka tirsan. Shirkaas waxa lagaga hadlay sidii xal loogu heli lahaa Lixda Goobood ee deldelan ee ku yaala Deegaanka Waqooyiga oo kala ah (Hulka, Ceel sheekh, Cabdi Geeddi, Ceel la helay, Bildhaalay iyo Damasha). Mar hadii ay dalka ka bilaabantay Diiwaangalinta Codbixiyayaasha, qof kasta oo muwaadin ah xaq u leeyahay inuu helo kaadhka codbixinta doorashooyinka soo socda. Shirkaas oo si adag looga wada hadlay sidii go,aan looga gaadhi lahaa Gobolka ay raacayaan iyadoo la eegayo Xuduudkii 1960 Degmooyinkii waqtigaas.
Shirkaas waxa kasoo baxay laba qodob oo kala ah:-
1. Waxa laysla gartay In dadka ku dhaqan deegaankaasi ay helaan xuquuqdooda muwaadinimo lana geeyo diiwaanglainta, Komishankuna wuxuu balan qaaday inaan Saddexda Gobol ee ku muransan (Awdal, M/Jeex, Saaxil ) aan midna lala diiwaangalin. Lana raacin doono diiwaangalintooda Gobolada Sanaag ama Sool mid ahaan.
2. In mudada ka horaysa ay Xukuumadu Go,aan kasoo saarto Gobolka ay Raacayaan iyadoo loo eegayo 1960 xuduudkii ay lahaayeen Degmooyinkii waqtigaa jiray. Waxaana si gaar ah hawshaa loogu xil saaray Wasaarada Arimaha Gudaha waqti kooban inay ku dhamaystiraan.
Waxa kasoo wareegtay mudo 6 bilood iyo dheeraad ah ilaa maantana waa sidii oo halkiiba lagama soo qaadin Wasaarada Arimaha Gudahu wax talaabo ah oo ay qaaday mudada intaa le’eg ma jirto. Waa nasiib daro qaranka ku habsatay in maanta markii la gaadhay waqtigii la gayn lahaa Diiwaangalinta inay Xukuumadu gabgab layso oo hanjabaad iyo amaro adag warbaahinta la soo fadhiisto. Kadib markii ay ku fashilantay in Go,aan kasoo saarto halka ay raacayaan 6 goobood si dadka ku dhaqana ay u helaan xuquuqdooda muwaadinimo ee Doorashooyinka Golaha Deegaanka, Golaha Wakiilada iyo Madaxtooyada inay codkooda ka dhiibtaan.
Labadii qodob ee lagu Heshiiyay Komishankii way kasoo baxeen dhankoodii oo waxay yidhaahdeen waanaga diyaar Sanaaduuqdii goobaha la gayn lahaa, balse Xukuumadu hawsha dhankeedii umay dhaqaaqinba. Soomaalida ayaa waxay ku maahmaahdaa “INDHOOLE DHIRBAAXO DABADII AYUU GABADAA”. Markaad waajibkaagii dayacdo inaad kolba dhinac u carartaa waa ged lagu yaqaan, balse waxa Xukuumada u furnaa maadaama ay go,aan kasoo saari wayday in mar labaad dib isugu yeedho oo talo qaran laga gaadho, waxay ahayd inay u yeedho oo ay la hadasho Bulshada iyo Madax dhaqameedka kasoo jeeda Deegaanadaas oo ay qanciso, may ahayn in Warbaahinta ay kawada hadlaan oo waliba hadalo adag lays waydaarsado. Xukuumadu waa xukuumad waxa loo doortay inay dalkan hogaamiso cid kasta oo wax tabanaysa qanciso. Hadaba waxa layaab ah Wareegto ay Xukuumadu shalay kasoo saartay Diiwaangalinta Lixda Goobood oo Wasiirka Cusub ee Arimaha Gudahu warbaahinta u akhriyay, waxaanu sheegay in la Diwaangelinayo Dadka ku dhaqan Lixda Goobood ee Waqooyiga Hargeysa, si ay Codkooda uga dhiibtaan Doorashada Madaxtooyada oo keliya, laakiin aan loo ogoleyn inay ka qayb-qaataan doorashooyinka Golaha Wakiillada iyo Deegaanka. Waxa is waydiin leh Doorashadii Madaxtooyada iyo Wakiilada Miyaa lakala qaaday oo midba gaarkeeda ayaa loo qabanayaa. Hadii aanay sidaa ahayn ma jirto sabab muwaadinka codkiisa loo hor istaago oo la yidhaa doorashada Madaxtooyadana waad codayn kartaa ta wakiilada ma codayn kartid.
Waxaan talo ahaan soo jeedin lahaa in aan la siyaasadayn diiwaangalinta Lixdaa Goobood, sidoo kale in arinkaas talo laga yeesho tuur tuurkana laga daayo. Xukuumadana waxa waajib ku ah ilaalinta nabadgalayada kana taxadirto wax kasta oo abuuraya Nabadgalyo daro ama bulshada kicin ku abuuraya, sidoo kale waa in laga foojignaadaa wax kasta oo diiwaangalinta carqaladaynaya gobolkii ugu danbeeyay ayay ka socotaa xilbaa inaga wada saaran ilaalinteeda. Waxaan kusoo ururinayaa Xalbaa laga rabaa Xukuumada iyo Wasaarada Arimaha Gudaha, Mar haday ka gaabisay inay go,aan kasoo saarto Gobolka ay raacayaan ka hor inta aanay gaadhin waqtiga Diiwaangalinta.
Falanqeeya arimaha bulshada iyo Siyaasada.